टेलिकममा कामिनीले मारिन् बाजी, पाउलान् ग्राहकहरुले गुणस्तरीय सेवा ? « Pahilo News
टेलिकममा कामिनीले मारिन् बाजी, पाउलान् ग्राहकहरुले गुणस्तरीय सेवा ?
प्रकाशित मिति : 23 September, 2016 10:02 am
७ असोज । तीन दशकदेखि नेपाल टेलिकममा कार्यरत रहँदै आएकी कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारले प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । टेलिकमकी नायव प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
गएको भदौ २० गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन मागिएपछि १३ जना इच्छुकहरुले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ६ जनाको नाम अन्तिम सूचिमा परेको थियो । अन्तिम सूचिमा परेकामध्ये राजभण्डारीसहित टेलिकमकै प्रबन्धक सुनिल पोखरेल र नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष मदन खरेलको नाम सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिले सरकारसमक्ष पेश गरेको थियो ।
को हुन् कामिनी ?
प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त राजभण्डारी टेलिकमको पुराना कर्मचारी मानिन्छन् । उनले सन् १९८५ बाट टेलिकममा सेवा सुरु गरेकी थिइन् । टेलिकममा लामो अनुभव सँगालेकी उनले सन् २०१४ मा नायब प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेकी हुन् ।
भारतको पञ्जाव इन्जिनियरिङ कलेजबाट इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन्समा स्नातक उत्तीर्ण गरेकी उनले करिब एक दशकअघि टेलिकमको पुनःसंरचना हुँदा प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएकी थिइन् । उनले एसियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीबाट एमबीए पनि पूरा गरेकी छिन् । उनले जीएसएम, माइक्रोवेभ, फाइबर अप्टिक्स, वायरलेस, सीडीएम र भीओआईपीजस्ता विषयमा दक्षता राख्ने गरेकी बताइन्छ । यसअघि उनले इन्टरनेटमा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे र नयाँ प्रविधिको फिक्सड नेटवर्कको परियोजनामा समेत काम गरेकी थिइन् ।
उत्तिकै छ चुनौती पनि
देशकै टेलिकम क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको नेपाल टेलिकमले प्रबन्ध निर्देशकमा पहिलो पटक महिना नेतृत्व पाए पनि उनका सामु थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन् । नेपालमा टेलिकम क्षेत्र फराकिलो बन्दै गए पनि ग्राहकहरुको गुनासोको चाङ पनि उत्तिकै लाग्ने गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले नयाँ नयाँ प्रविधि पछ्याएर सेवा विस्तार गरे पनि गुणस्तरीयतामा भने प्रश्चचिन्ह उठ्दै आएको छ । अहिले नेपाल टेलिकमले ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर, गुणस्तरीय सेवा भने दिन सकिरहेको छैन । नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीका सामु ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।